Safiirka Sweden ee Soomaaliya oo gaaray Garowe.Muxuuse uu ka dooney Garowe? — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Safiirka Sweden ee Soomaaliya oo gaaray Garowe.Muxuuse uu ka dooney Garowe?
Safiirka Sweden ee Soomaaliya oo gaaray Garowe.Muxuuse uu ka dooney Garowe?
Garowe (Caasimadatimes)-Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta kulan kula qaatay Qasriga Madaxtooyada Garoowe wefti balaadhan oo uu hogaaminayo Safiirka dalka Iswiidhan ee Soomaaliya Mr. Staffan Tillander iyo ku-xigeenkiisa Johan Svensson.
Madaxweynaha Puntland ayaa ugu horayn Safiirka kusoo dhaweeyey Puntland, waxa uu uga mahadceliyey doorkii dowladda Iswiidhan ku lahayd dib u dhiska Soomaaliya iyo guud ahaan horumarada kala duwan ee ay dalka ka geysteen.
Previous articleCabdi Kariin Guuleed oo War aan horey looga baran ka soo saaray xaalada Galmudug
Next articleGuddiga Farsamada Galmudug oo ku dhawaaqay in ay bilaabayaan Xaraynta Odayaasha Dhaqanka.
Mareykanka oo Weerarkii Balli Doogle oga jawaabey duqeymo culus.